Galmudug: Qaramada Midoobay xaq uma lahan muwaadin la doortay inay dhahdo Liiska Aqalka sare halaga saaro.. | Isha Caasimada Soomaaliya
Maamulka Galmudug, ayaa jawaab waxa ay ka bixiyeen warqad ka soo baxday Xafiiska Wakiilka Qaramada Midoobay ee arimaha Somaliya, taasi oo lagu dalbaday in Liiska Aqalka sare laga saaro Xubno Dagaal oogayaal ay ku tilmaamtay Qaramada Midoobay.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug Cali Gacal Casir oo Warbaahinta la hadlay, ayaa wuxuu sheegay inay muhiim tahay tixgelin in la siiyo rabitaanka shacabka Somaliyed.
Waxa uu sheegay xubnaha Aqalka Sare ee Galmudug inay ku soo baxeen Doorasho cod aqlabiyad leh oo ay doorteen Xubnaha Baarlamaanka Galmudug.
“Anaga runtii wax naga quseeya ma jiraan arrintaas, qof muwaadin Soomaaliyeed ee ay doorteen Baarlamaanka, waliba cod badan helay in laga saaro inay dhahaan ma ahan, markii hore nalama dhihin qof hebel halaga reebo, warqadaasna inaan meelaha ka maqalnay mooyee nalooma soo dirin”ayuu yiri Guddoomiye Cali Gacal Casir.
Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay xubnaha Qaar ee Doorashada ku soo baxay iyo kuwa hada dhiman oo doonaya inay u tartamaan Aqalka sare, kuwaasi oo ka imaanaya Maamul Goboledyada dalka ka dhisan.